ဆန်နီနေမင်း: ဆန်နီနေမင်း အမေးအဖြေ ရုပ်ပွားတော်နဲ့ပတ်သတ်၍
ဆန်နီနေမင်း အမေးအဖြေ ရုပ်ပွားတော်နဲ့ပတ်သတ်၍
ဆန်နီနေမင်း အမေးအဖြေ မေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့ပတ်သတ်၍
May I ask youaquestion please, Sayardaw. I live in England. There is one English Family in here. They want to know that why the Image of Buddha is several kind of face in Japan, China, India and Myanmar? There are different kinds of Buddha's Face. They really want to know. I didn't know how to answer for their question at this time. Therefore, would it be OK if you explain me. So, I can explain them next time. Thank you so much Sayardaw.
မြတ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မျက်နှာအသွင်များ ကွဲပြားရခြင်းမှာ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် ပြုလုပ်သူများ၏ နိုင်ငံနှင့်လူမျိုး အပေါ်မှာမူတည်၍ ကွဲပြားသွားကြပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မြတ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို မိမိတို့ လူမျိုးမျက်နှာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကို ကြည့်ရှု့ပြီး ထုလုပ်ကြသည်က များသောကြောင့်ပင် ဖြစ်ပေသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်အခါက မြတ်ဗုဒ္ဓသည် မိခင်ရင်းဖြစ်သော မယ်တော်မာယာဒေ၀ီ ရောက်ရှိနေသည့် တာဝတိံသာနတ်ပြည်သို့ သွားရောက်၍ တရားဟောကြားသောအခါ ကုဒါယနအမည်ရှိသော မင်းသည် မြတ်ဗုဒ္ဓနတ်ပြည်မှ ပြန်ကြွမလာ သောကြောင့် ရှင်မောဂ္ဂလာန်အား မြတ်ဗုဒ္ဓအစား ကိုးကွယ်ဖို့အတွက် ရုပ်ပွားတစ်ခု ယူဆောင်ပေးရန် တောင်းပန်းလျှောက်ထားခဲ့ပေသည်။
ထိုအခါ ရှင်မောဂ္ဂလာန်ကိုယ်တော်မြတ်သည် မြတ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပန်းပုဗိသုကာ ဆရာတစ်ယောက်အား တာဝတိံသာနတ်ပြည်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလျှင် မြတ်ဗုဒ္ဓအားဖူးမျှော်စေပြီး စန္ဒကူးနံ့သာသားနဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓဆင်တုတော်ကို ပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့ပါပေသည်။
မဟာဝံသကျမ်းအလိုအရ မြတ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကို ဒေ၀ါနံပိယတိဿမင်း လက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုပေသည်။ အချို့သော ပညာရှင်များ၏ အလိုအရမှာတော့ ဒုတုဂါမုနုမင်းလက်ထက်ကတည်းက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွား တော်များ ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုပေသည်။ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ အစဉ်အလာအရ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များသည် ပုံစံ(၃)မျိုး ရှိပေသည်။ (၁) မတ်တပ်ရပ် ရုပ်ပွားတော်၊ (၂) ထိုင်တော်မှုရုပ်ပွားတော်၊ (၃) လျောင်းတော်မူရုပ်ပွားတော်ဟူ၍ (၃)မျိုး ရှိပေသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ၏ မျက်နှာပုံစံ ကွဲပြားရခြင်းမှာ ရုပ်ပွားတော်ပြုလုပ်သော ဗိသုကာ ပညာရှင်များ၏ မိမိတို့လူမျိုးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့စိတ်ကူးအတိုင်း ပုံဖော်ကြသောကြောင့် တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ မတူညီဘဲ ကွဲပြားသွားကြပါသည်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ ထုလုပ်သောရုပ်ပွားတော်များသည် သီရိလင်္ကာဗိသုကာပညာရှင်များ၏ စိတ်ကူးအတိုင်း ဖြစ်လာသလို မြန်မာနိုင်ငံ၌ ထုလုပ်သောရုပ်ပွားတော်များ သည်လည်း မြန်မာဗိသုကာများ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စိတ်ကူးအတိုင်း ဖြစ်လာပေသည်။
ထိုကဲ့သို့ နိုင်ငံနှင့်လူမျိုး ယဉ်ကျေးမှုတို့ကွဲပြား၍ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မျက်နှာ အသွင်အပြင် ကွဲပြားခြားနားကြသော်လည်း မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လက္ခဏာတော်များ၊ ကြည်ညိုဖွယ်ရာဂုဏ်တော်များ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓသီတင်း သုံးတော်မူခဲ့သော ပုံစံများမှာကား တူညီကြပေသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မိမိတို့၏ စိတ်သန္တာန်၌ မိမိရှေ့တွင်ရှိသော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို သက်တော် ထင်ရှားရှိသော မြတ်ဗုဒ္ဓကဲ့သို့ ရည်မှန်းပူဇော်ကာ ကောင်းမှုကုသိုလ်များ ပြုလုပ်လျှင် ထိုက်တန်သော ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများသည် ဧကန်မုချရရှိမည် ဖြစ်သောကြောင့် မိမိစိတ်သာလျှင် အာရုံပြုတတ်ဖို့နှင့် ကြည်ညိုမှုအစစ်ဖြစ်ဖို့သာ အဓိကကျပေသည်။ ထို့ကြောင့် လူသားအားလုံး မြတ်ဗုဒ္ဓအား ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရား ပြည့်ဝစွာဖြင့် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း နိဂုံးချုပ် လိုက်ရပါပေသည်။
Posted by ဆန်နီနေမင်း at 12:15 AM
Labels: answer and question